Agụụ Concentrator, Electroplated naa draya, Agụba draya - Yanjialong
DW usoro otu oyi akwa belt draya
Single mmetụta wastewater evaporator
Single mmetụta wastewater evaporator were: Nke a na ngwá adabara maka ọgwụ, ndu, nri, chemical na ndị ọzọ ọrụ, na a na-eji maka evaporation nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ extracts, mkpụrụ juices, mma chemical ngwọta, wdg Atụmatụ: a. Kọmpat Ọdịdị na obere n'ala ebe. Nkenke polishing n'ime ma n'èzí akụrụngwa, na akara na GMP chọrọ. b. The ngwá na tumadi ekewet nke a okpomọkụ, a separator, a defoamer, a condenser na dị ka. c ....
YZGFZG usoro agụụ draya
YZG / FZG usoro agụụ draya Introduction: The na-akpọ agụụ ihicha bụ nkụ ihe n'okpuru agụụ ọnọdụ, na ọ bụrụ na agụụ mgbapụta na-eji maka pumping na dehumidifying, ihicha ọnụego na-accelerated. Note: Ọ bụrụ na a condenser na-eji, ndị mgbaze na ihe nwere ike natara site condenser; ma ọ bụrụ na ndị SK usoro mmiri mgbanaka agụụ mgbapụta na-eji, ndị condenser nwere ike ịhapụ, na-azọpụta ike ego. ngwaahịa nkọwa: YZG / FZG usoro agụụ draya bụ nke static agụụ draya. The dr ...
Agụụ decompression concentrator
Agụụ decompression concentrator mbụ, akporo nke ngwa a na ngwá adabara ịta nke mmiri mmiri na-emepụta ọgwụ, nri, chemical na ndị ọzọ ọrụ, na ike ga-eji dị ka mmanya mgbake na mfe reflux mmịpụta. The akụkụ na kọntaktị na akụrụngwa na-mere nke igwe anaghị agba nchara, nke nwere ezi corrosion-eguzogide ma na-emezu ihe GMP ụkpụrụ. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The ngwá na tumadi ekewet nke a ịta tank isi ahụ, a Alụlụụ-mmiri mmiri ...
Ugboro abụọ mmetụta concentrator
Ugboro abụọ mmetụta concentrator mbụ, akporo nke ngwa The concentrator adabara ịta nke dị mmiri mmiri dị otú ahụ dị ka omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ, n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ, glucose, starch, monosodium glutamate, mmiri ara ehi na ngwaahịa, kemikal, wdg, na karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ala okpomọkụ agụụ ịta nke okpomọkụ mwute ihe. Mgbe ịkpachara anya ngụkọta oge na-akpachara anya imewe, anyị ụlọ ọrụ nwere ndị ọzọ uru karịa mbụ atụmatụ. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The abụọ-mmetụta ...
Atọ-mmetụta concentrator mbụ, akporo nke ngwa The concentrator adabara ịta nke dị mmiri mmiri dị otú ahụ dị ka omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ, n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ, glucose, starch, monosodium glutamate, mmiri ara ehi na ngwaahịa, kemikal, wdg, na karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ala okpomọkụ agụụ ịta nke okpomọkụ mwute ihe. Mgbe ịkpachara anya ngụkọta oge na-akpachara anya imewe, anyị ụlọ ọrụ nwere ndị ọzọ uru karịa mbụ atụmatụ. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The atọ mmetụta c ...
* Tụkwasị concentrator
* Tụkwasị concentrator mbụ, akporo nke ngwa a na ngwá adabara ịta nke mmiri mmiri na-emepụta ọgwụ, nri, chemical na ndị ọzọ ọrụ, na ike ga-eji dị ka mmanya mgbake na mfe reflux mmịpụta. The akụkụ na kọntaktị na akụrụngwa na-mere nke igwe anaghị agba nchara, nke nwere ezi corrosion-eguzogide ma na-emezu ihe GMP ụkpụrụ. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The ngwá na tumadi ekewet nke a ịta tank isi ahụ, a Alụlụụ-mmiri mmiri separator, ...
Eriri igwe agụụ concentrator
Eriri igwe agụụ concentrator mbụ, akporo nke ngwa The ngwaọrụ adabara ịta nke mmiri mmiri ihe ndị dị ka omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ, n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ, ihe oriri, monosodium glutamate, mmiri ara ehi, glucose, starch, ihe ọṅụṅụ, chemical na dị ka. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The ngwaọrụ bụ a cylindrical akara ngwaọrụ a kwes mkpuchi jaket, nke a na-vacuumed na a mfe na oru oma haịdrọlik ejector. The ngwá ekewa atọ, ndị evaporation chambe ...
Mmanya mgbake concentrator
Mmanya mgbake concentrator mbụ, akporo nke ngwa a na ngwá adabara maka ọgwụ, ndu, nri, chemical na ndị ọzọ ọrụ. Ọ bụ mgbe eji maka evaporation nke omenala Chinese na nkà mmụta ọgwụ extracts, ezi chemical ngwọta, wdg Ọ bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na evaporation na mgbake nke organic solvents. Nke abụọ, bụ ngwá ọrụ mejupụtara The ngwá na tumadi ekewet nke a okpomọkụ, ihe evaporator, a defoamer, a abụọ condenser, a oyi, a mmiri mmiri ndibọbọ ta ...
Arụ ọrụ ụkpụrụ nke atọ mmetụta evaporator maka elu-nnu mmiri mmiri
The atọ mmetụta evaporator bụ ụdị nke mmịpụta na ịta akụrụngwa, nke na ọtụtụ-eji na evaporation na ịta usoro nke mmiri mmiri ihe ndị dị ka pharmaceuticals, Chemicals, nri, na ìhè ụlọ ọrụ. Oge anụ ahụ ọkụ dị mkpụmkpụ, oge ọsọ ọsọ na-agba ọsọ, t ...
Igwe oxygen na ikuku na-etinye uche ga-agba akaebe ụwa kachasị elu na 2019-2025
Atụmanya ahịa nke oxygen cylinders na concentrates, nyocha zuru ezu na isi ahịa na amụma na amụma, 2019-2025. Ogwuru oku oxygen na mkpesa ndi nlere anya bu ihe bara uru nke data maka ndi na acho ahia. Ọ na-enye nyocha nke uto ahịa maka ụlọ ọrụ na ...
Nnyocha na nyocha nke uru na ọghọm dị na mmiri nke ndị na-amịpụta ihe nkiri
Ada ada film evaporator bụ ụdị nke elu-arụmọrụ evaporation akụrụngwa, nke a na-ịgụkọ akpọ mkpa ịse evaporator ọnụ na-ebili film evaporator na kpụchara film evaporator. Mkpa evaporators nwere nnukwu uru na-ejikwa ya na kemịkalụ, ụlọ ọrụ ọkụ na foo ...
Kpụrụ nke mmanye mgbasa evaporator
Ihe mmanye na-eme ka a na-ekesa ya bụ ihe na-ekpo ọkụ nke na-adabere na ike mpụga ịgbasa. Ndị a manyere mgbasa evaporator bụ ihe kwesịrị ekwesị maka evaporation nke crystallinity, fouling, elu ịta, elu viscosity, na unyi anaghị agbasa na solidified n'efu mmiri na n'efu mmiri mmiri. itinye uche. ...
Thedị adị na ozi nke MVR evaporator
MVR evaporator bụ ụdị ọhụrụ nke arụmọrụ dị elu na ihe nchekwa ume na-eme ka a ghara iji ya rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ. Akụrụngwa ahụ na-eji teknụzụ na-agba ume dị ala na obere nrụgide na ume dị ọcha iji mepụta uzuoku dị ka ike ikewapụ mmiri dị n'etiti. Ọ bụ ihe na ...
© nwebisiinka - 2010-2022: Edebere ikikere nile. Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Single Mmetụta agụụ Concentrator, Single Layer ntupu-echebe Mmadụ draya, Ugboro abụọ Mmetụta Concentrator, Single Mmetụta Concentrator,
Obodo Nihe Zhenglu, ChangzhouCity, Jiangsu